Enye yemikhiqizo ewusizo kakhulu futhi ethandwa yinoma ubani - kungcono ikhukhamba. Abantu abaningi bakholelwa ukuthi uma wakhiwa cishe ngokuphelele emanzini, bese umzimba udinga izinto kuye. Kodwa nakuba isikhona umbono ezivamile, lo mkhiqizo iyasiza. Nge acima kalula ngakho ukoma kwakho futhi asihlanze umzimba ubuthi? Yiqiniso, ikhukhamba. Izinzuzo kanye efanele ibe kuhlu lokuhlukumezeka ka yakhe wake uphenyo ososayensi emhlabeni jikelele.
Iqiniso lokuthi lokhu umkhiqizo kakhulu-kilojoule amaningi, okwenza kube nokudla okumandi kakhulu kulabo abafisa ukuba ulahlekelwe isisindo. Special ikhukhamba Ukudla ngeke kusize kuphela ukuncipha emzimbeni kodwa futhi detoxify umzimba, ukususa ukuvuvukala futhi komlayezo umzimba. Amanzi eziqukethwe ikhukhamba acima kahle ukoma futhi rejuvenates emzimbeni.
Kunconywa isikhumba impilo has a ikhukhamba. Izinzuzo kanye efanele ibe kuhlu lokuhlukumezeka ngakho ngesikhathi esifanayo ngenxa iqiniso lokuthi wayengumuntu 90 per cent liqukethe amanzi ehlelekile, okuyinto matasa ngokushesha, yokumatisa isikhumba umswakama. Iphinde aqede induna nangokushisa komzimba kuthuthukisa isimo izinsini namazinyo. Ikhukhamba kuyinto enhle kakhulu amakhorali ejenti, deducing freckles kanye nobudala izindawo. Ngaphezu kwalokho, liqukethe lukhulu potassium ne-silicon, okuyinto ngcono isimo izinwele kanye isikhumba siyagcinwa ithoni. Kodwa akubona bonke abantu ngokuvamile baphathe ubuningi okusamanzi, ngakho udinga ukuqapha isimo sakho.
Impilo esimiso senhliziyo nemithambo yegazi kubalulekile ukudla ikhukhamba. Izinzuzo kanye efanele ibe kuhlu lokuhlukumezeka ke odokotela babheka eziningi. Kwatholakala ukuthi uma usebenzisa lo mkhiqizo evamile inhliziyo umsebenzi wegazi lazo wawungcono, edema wanyamalala, ngomusa ehlanza namathumbu. Ikhukhamba juice ubonisa cholesterol okweqile kusukela umzimba iphinde ivimbele sebethule nosawoti.
Ukusetshenziswa yamakhukhamba fresh kakhulu. Ngoba ziqukethe ezihlukahlukene amaminerali yensimbi, i-chromium, i-potassium, i-iodine manganese, nabanye. Kanye eningi isiliva ukhukhamba. Ngakho-ke, ukuthi inethonya eqinile anti-inflammatory. Lezi imifino ezinothe ngamavithamini B, C no carotene, futhi ngaleso sizathu angaphendula ngcono izivikeli mzimba nangamandla. Ukhukhamba nazo ziqukethe uhlu ne-glucose fructose, okuyizinto ezidingekayo ukuze umsebenzi evamile ingqondo.
Zingasetshenziswa njengoBaba omnene laxative, isisu analgesic futhi antipyretic. Ukhukhamba ewusizo yezifo yegilo kanye iziyaluyalu umzimba. Asiza ku ukugaya of amaprotheni namafutha, kuvimbela ukuguqulwa carbohydrate ku amafutha. Lokhu kungenxa yokuthi ku Ukwakheka yabo iqukethe into eyingqayizivele - tartronic acid. Ukhukhamba futhi iwukudambisa acid umzimba, okwakuyoholela sebethule nosawoti. Futhi okuqukethwe elikhulu potassium kanye sodium normalizes amanzi umzimba.
engavamile kakhulu, lokhu yemifino - ikhukhamba. Izinzuzo kanye efanele ibe kuhlu lokuhlukumezeka ka bakhe besikhathi eside impikiswano phakathi kodokotela kanye cosmetologists. Kukholakala ukuthi ezifana yemifino ewusizo iphephile. Kodwa izingozi yamakhukhamba Kuhle kokusho kakhulu. Kuyinto engathandeki ukuba eziningi abantu izilonda noma kolwelwesi. Phela, nabo basuke kungandisa asidi we esiswini. Ngaphezu kwalokho, kungaba ukhukhamba ekuqaleni esiyingozi etshalwa usebenzisa semali nitrate, nezinye umquba.